I-Visa yaseLesotho | Yenza isicelo sabakhenkethi eVisa kwi-Intanethi | natvisa.com
Isicelo seLisa saseVisa saseLesotho
Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle welizwe lazisa indawo yeVisa abakhenkethi ukwenza inkqubo yokufumana i-visa, elula kwaye ilula. Ngesixokelelwano se-elektroniki sikhona, abantu abavela kumazwe aliqela ngoku banokufaka isicelo kolu xwebhu lokuhamba besiya kumakhaya abo, ngaphandle kokudibana nozakuzaku belinde emigceni emide. I-eVisa yenze ukuba abemi bamazwe angaphezu kwe-100 bakwazi ukufumana i-visa ngokulula. Yonke inkqubo yenziwe kwi-intanethi. Ekuphela kwento ekufuneka beyenzile kukugcwalisa iphetshana lesicelo, nincamathisela amaxwebhu afunekayo eskena kunye nefom, ungenise kwaye ekugqibeleni wenze intlawulo. I-visa iya kusiwa kwi-ID yabo nge-imeyili kwiintsuku ezimbalwa.
Iindidi zeVisa yaseLesotho
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli 90 Days Ukufikelela kwiintsuku ezingama-90 enye Faka isicelo ngoku
Abantu abacwangcisa uhambo oluya eLesotho kufuneka babe nala maxwebhu alandelayo xa besenza isicelo se-eVisa yoKhenketho. La maxwebhu abandakanya:
Isithuba seenkcukacha zakho zencwadana yokundwendwela
Ileta yokwazisa evela kumqeshi
Isatifikethi somkhuhlane otyheli
Ukuba umenzi-sicelo uhamba nomntwana omncinci (oneminyaka eli-16 ubudala nangaphantsi) baya kuthi banike isatifikethi sokuzalwa somntwana, ileta yemvume evela kubazali okanye yomgcini. Ukusilela ukubonelela ngala maxwebhu kunokukhokelela ekungavunyelweni kwesicelo se-Visa.
Njengoko yonke inkqubo ye-eVisa iqhutywa kwi-Intanethi, abafaki-zicelo kufuneka babe ne-imeyile eyi-Id. I-imeyile iyafuneka ukufumana ulwazi malunga nenqanaba lesicelo se-visa kunye nokufumana i-eVisa.
Enye yezona mfuno zibalulekileyo zokufumana i-eVisa eLesotho yipasipoti esemthethweni. Xa ufaka isicelo se-eVisa, incwadana yokundwendwela kufuneka isebenze kwifayile ye- ubuncinci bexesha leenyanga ezintathu. I-eVisa yaseLesotho ivumela abahambi ukungena kube kanye. Le visa iya kuvumela iindwendwe ukuba zihlale eLesotho kangangeentsuku ezingama-90.
Ukubonelela ngobungqina ngendawo yokuhlala kubakhenkethi bamanye amazwe abatyelele eLesotho. Banokubonelela ngeenkcukacha zobhaliso zehotele abaza kuhlala kuyo okanye isiqinisekiso sokubhukisha.
Visa eLesotho Visa
Olona xwebhu lubaluleke kakhulu ekufuneka unalo xa ufika eLesotho yi-eVisa yakho, ekufuneka ivunywe kwaye isayinwe. Ukusilela ukuyiveza kuya kumisa ukungena kwakho kwilizwe.
Abahambi kufuneka baphathe nencwadana yokundwendwela esemthethweni kangangexesha elincinci leenyanga ezi-6.
Amatikiti eenqwelo moya aqinisekisiweyo
Ukufika kwabo eLesotho, iindwendwe kufuneka zinike itikiti lokufika kwazo eliqinisekisiweyo.
Isatifiketi sokugonyelwa i-Yellow Fever
Isatifiketi sokugonyelwa i-Yellow Fever siyadingeka kubafakizicelo abavela kwindawo apho kuxhaphake uGawulayo / uGawulayo. Nje ukuba bafike kwisikhululo seenqwelomoya, kufuneka basinike esi siqinisekiso kwabaphetheyo.
Iinkcukacha zaseLesotho Visa
Yintoni iLesotho eVisa?
ILesotho eVisa luxwebhu lokuhamba olwamkelweyo nguMphathiswa Wezangaphandle waseLesotho. Abahambi bamanye amazwe kufuneka babe nalo olu xwebhu lokundwendwela kunye nokuhamba ngaphakathi kommandla wesizwe woBukumkani baseLesotho. Inkqubo ye-elektroniki yokufumana i-visa yaziswa ukwenzela ukuba iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela zikwazi ukufumana olu xwebhu lokuhamba ngokukhawuleza ngaphandle kwengxaki. Yonke le nkqubo ikwi-Intanethi, evumela abafake izicelo ukuba benze isicelo solu xwebhu nakweyiphi na indawo.
Amanyathelo okufaka isicelo seLesotho Visa kwi-Intanethi
Inkqubo ye-elektroniki ye-eVisa yaziswa ukwenza lula kubakhenkethi bamanye amazwe ukufumana i-avisa. Ngale nkqubo intsha, akukho mfuneko yokuba abantu baye naphi na kodwa bafake nje izicelo kumakhaya abo. Amanyathelo alula kwaye kulula ukuwalandela:
Gcwalisa ifomu lesicelo: Ukuqala ngenkqubo yesicelo se-visa, kufuneka uqale ugcwalise iphetshana lesicelo. Ifumaneka kwiwebhusayithi karhulumente, konke okufuneka ukwenze kukuyikhuphela kwaye uyigcwalise ngolwazi olufunekayo.
Ukungeniswa koxwebhu: Inyathelo lesibini libandakanya ukulayisha amaxwebhu ukuxhasa ulwazi olunikezwe kwifom yesicelo. Vele uwaskore ngokucacileyo amaxwebhu kwaye uwafake kunye nefom yesicelo.
Yenza intlawulo: Okokugqibela, xa yonke into yenziwe, gcwalisa inkqubo ngokwenza intlawulo yemali yokundwendwela. Ungayisebenzisa ikhadi lakho letyala okanye lokuthenga ngenxa yesi sizathu. Nje ukuba kwenziwe intlawulo, ifom yesicelo sakho iya kuqwalaselwa.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo se-eVisa eya eLesotho
I-eVisa yaseLesotho inokusetyenzwa kuphela ukuba injongo yokutyelelwa kweli lizwe nokuba kungamashishini okanye kukhenketho.
Abemi bamazwe angaphezu kwe-100 bayacelwa ukuba bafake izicelo ze-eVisa phambi kokutyelela eLesotho. Nangona kunjalo, abemi bezizwe ezithile baxolelwe kulo mthetho.
Abantu abasuka kula mazwe alandelayo bangahlala eLesotho ukuya kwiintsuku ezingama-90 ngaphandle kokufaka isicelo se-Visa-iTrinidad neTobago, iTuvalu, i-Uganda, iVanuatu, iZambia, iTanzania, iTonga, iDominica, iGambia, iGrenada, iGuyana, iHong Kong, i-Ireland, i-Israel, IJamaica, iJapan, iPapua New Guinea, iSanta Kitts neNevis, iSt. ISamoa, iSan Marino, iSeychelles, iSierra Leone, iSwitzerland kunye neeSolomon Islands.
Abemi bala mazwe alandelayo banokuhlala eLesotho ukuya kwiintsuku ezili-14 ngaphandle kwevisa-iJamani, i-Itali, i-Itali, iSweden, iSwitzerland, iNorway, iPortugal, iSpanish, iNetherlands, iNew Zealand, iSouth Korea, iBelgium, iRiphabhlikhi yaseDenmark, EFinland naseFrance.
Kutheni ndifuna i-eVisa yokuya eLesotho?
I-eVisa yipemethe yokuhamba enikwa wonke umhambi welinye ilizwe otyelele eLesotho. Ke ngoko, wonke umntu, ongengommi waseLesotho kufuneka afumane i-visa ngaphambi kokungena kummandla weli lizwe.
Yintoni esebenzayo ye-eVisa yaseLesotho?
Ngaba ndifuna ukuveza naluphi na uxwebhu xa ndifika eLesotho?
Ukufika kwakho eLesotho, kuya kufuneka unikezele ngamaxwebhu athile kwabasemagunyeni. Amaxwebhu yi-eVisa evunyiweyo, uxwebhu lokuhamba, isatifikethi sokugonyelwa iCesina eMthubi kunye namatikiti eenqwelo moya aqinisekisiweyo.
Luhlobo luni loxwebhu ekufuneka ndilunikile njengobungqina bendawo yokuhlala?
Maninzi amaxwebhu onokuwabonisa njengobungqina bendawo yokuhlala ezinje ngeenkcukacha zokubhukisha zehotele oza kuhlala kuyo, iinkcukacha zabo zonxibelelwano kunye nohambo lwakho.
Mangaphi amangenelo ndivunyelweyo nge-eVisa enye yaseLesotho?
Uvunyelwe ukungena kube kanye nge-eVisa enye eLesotho.
Ithini imeko yepasipoti yam xa ndisenza isicelo se-eVisa eLesotho?
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umntu kufuneka abe nepasipoti esemthethweni ekufuneka isebenze ubuncinci isithuba seenyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Yeyiphi indlela yokubhatala endinokuyisebenzisa ukuhlawula umrhumo we-eVisa?
Unokukhetha indlela yokubhatala kwi-intanethi usebenzisa idebhithi okanye ikhadi lekhredithi ekwenzeni intlawulo ye-eVisa.
Uya kwaziswa malunga nesicelo sakho se-visa kwi-imeyile yakho ye-imeyile.
10. Ndiyifumana njani i-eVisa yam?
I-eVisa yakho iya kuthunyelwa kuwe nge-imeyile id. Kucetyiswa ukuba uprinte xa useluhambeni.